Livela Kuphi Leli Zwi | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ngazalelwa emndenini wamaKristu, futhi nginezihlobo eziningi ezingabashumayeli. Kusukela ngesikhathi ngisemncane, ngalandela abazali bami ekukholweni eNkosini. Emva kokuba sengikhulile, ngabhekisa eNkosini ngomkhuleko: uma nje ngingathola umyeni okholwa eNkosini, ngingazinikela mina kanye naye sisebenzele iNkosi. Emva kokuba sengishadile, umyeni wami wayekholwa ngempela eNkosini, futhi waba ngumshumayeli ozinikele ngokuphelele. Ukuze umyeni wami ezwe ekhululekile emsebenzini wakhe weNkosi, futhi ukuze akwazi ukugcwalisa isibopho sakhe phambi kweNkosi, ngazinikela ukuthatha imithwalo yokubhekana nekhaya. Yize noma kwakunzinyana futhi kukhathaza, inhliziyo yami yayigcwele intokozo nokuthula noma ngabe ngangihlupheka kangakanani ngoba ngangineNkosi eceleni kwami ingeseka.
Emva kuka-1997, ngathola ukuthi umyeni wami wayengasakhanyiselekile ngendlela ayekade ekhanyiseleke ngayo ekuqaleni ekushumayeleni kwakhe. Lapho ngimcela ukuba enze okuthile okungumsebenzi wasekhaya, wayehlala njalo enza izaba ngokuthi wayematasatasa kangakanani nomsebenzi wakhe wokushumayela. Ngisho noma ewenzile umsebenzana wasendlini, inhliziyo yakhe yayisuke ingekho neze kuwona, futhi wayeye angithukuthelele ngezinto ezingatheni. Yize noma ngaphandle ngangibukeka ngibekezele futhi ngingahilizisani naye, enhliziyweni yami ngazizwa ngingenelisekile ngempela ngezindlela zomyeni wami. Imithwalo enzima yempilo yasekhaya nobumnyama bomoya wami kwangenza ngaphila ebuhlungwini. Into engangingayenza kwakungukuziletha ebukhoneni bukaNkulunkulu ngikhuleke ezinzulwini zobusuku lapho wonke umuntu eselele, ngicele iNkosi inginikeze ukholo namandla athe xaxa. Ngesikhathi esifanayo futhi, ngangilangazelela ukubuya kweNkosi masisha ukuze ingisindise empilweni yami eyayilusizi.
Ngelinye ilanga ngo-Ephreli 2000, ngenkathi ngihlela kahle izingubo, ngathola isikhwama somyeni wami. Ngaqaphela ukuthi sasiqumbile, ngakho ngavula uziphu ngenxa yokulangazelela ukwazi ngase ngibona ukuthi kwakuneBhayibheli nencwadi yamaculo ngaphakathi. Kwakukhona futhi nencwadi entsha eyayikhaviwe ngekhava yangaphandle. Ngazicabangela ngathi: “Kungani ngingakaze ngiyibone le ncwadi ngaphambilini? Kufanele ukuthi incwadi ethile yokubheka kuyo abashumayeli, noma yincwadi equkethe okuhlangenwe nakho kwabantu abakholwayo. Kufanele nakanjani ngiyifunde, mhlawumbe ngingathola ukusizakala kuyona.” Ngiholwa ukulangazelela kwami, ngabona isihloko esasithi, “Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala” “Saze sasisha futhi sangajwayeleka isihloko!” ngacabanga, “Ngokubuka nje isihloko sakhona, ukucwengwa akuyona into embi! Njengamanje ngisesimweni sokucwengwa okungaphezu kwamandla ami, ngakho kufanele ngithole ukuthi uhlangabezana kanjani ngokucwengwa futhi ngalokho ngingathola indlela yokuzilolonga.” Ngaleso sikhathi, ngaqala ukufunda: “Ezikhathini ezedlule, bonke abantu babeya phambi kukaNkulunkulu bayokwenza izifungo bathi: ‘Ngisho noma engekho omunye umuntu othanda uNkulunkulu, mina kumele ngimthande.’ Kodwa manje, ufikelwa ukucwengwa, futhi ngenxa yokuthi lokhu akuhambisani nemibono yakho, uphelelwa ukholo kuNkulunkulu. Ingabe lolu uthando lweqiniso? Usufunde kaningi ngezenzo zikaJobe—ingabe usuzikhohliwe? Uthando lweqiniso lungakheka okholweni kuphela. … Lapho ubhekene nokuhlupheka kumele ukwazi ukungacabangi ngenyama futhi ungakhonondi ngoNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu ezifihla kuwe, kumele ukwazi ukuba nokholo lokumlandela, uphinde ube nothando owawunalo ekuqaleni, ungaluvumeli lube ntekenteke noma lunyamalale. Ngisho ngabe uNkulunkulu wenzani, kumele uthobele uhlelo Lwakhe, ukulungele ukuqalekisa inyama yakho kunokukhononda Ngaye. Lapho ubhekene nokuvivinywa, kumele wanelise uNkulunkulu, ngisho ungakhala kabuhlungu noma ube nokunqikaza ukwehlukana nento ethile oyithandayo. Yilokhu kuphela okungabizwa ngokuthi uthando nokholo lweqiniso. Kungakhathalekile ukuthi isimo sakho sangempela siyini, kumele uqale ube nokuzimisela ukubekezelela ubunzima futhi ube nokholo lweqiniso, futhi kumele uzimisele ukudela inyama. Kufanele uzimisele ukubekezelela ubunzima nokulahlekelwa izinto ozithandayo ukuze ufeze intando kaNkulunkulu. Kumele uphinde ube nenhliziyo yokuzisola: Esikhathini esidlule awukwazanga ukwanelisa uNkulunkulu, futhi usuyazisola manje. Akufanele untule nokukodwa kulezi zinto—uNkulunkulu uyokuphelelisa ngalezi zinto. Uma ungayigcine le mibandela, khona-ke awunakupheleliswa.” La mazwi ayithinta ngempela inhliziyo yami. Ngangifunda ngikhala ngesikhathi esifanayo, njengoba la magama ayekhuluma ngesimo sami ngqo. Ngaphambilini nganginqume ukuzinikela mina nomyeni wami eNkosini. Ngangihlala ngenelisekile ngokuphelele ukubhekana nayo yonke imithwalo yekhaya ukuze ngeseke umyeni wami emsebenzini ayewenzela iNkosi ngaphandle, kungakhathaleki ukuthi kwakubuhlungu noma kukhathaza kangakanani. Kodwa-ke, ngenxa yobunzima ekhaya nokungakhathali komyeni wami, ngangihlale nginomuzwa wokuthi ngiphathwe kabi, ngihlala esimweni sokubhekana nokucwengwa, futhi ngalahlekelwa ukholo kanye nothando engangikade nginalo ekuqaleni. Ngangingakwazi ukugcina isinqumo engangisenze phambi kukaNkulunkulu, futhi ngangivame ukukhala ngingedwa ngasese. Ngacabanga ngokuthi uJobe wayekwaze kanjani ukufakazela uNkulunkulu phakathi kwesilingo esikhulu futhi esinzima, nokungalahli ukholo kuNkulunkulu, futhi wayeze wathi, “UJehova uphile, futhi uJehova uthathile; malibongwe igama lika Jehova” (UJobe 1:21). Ngangingakukhohlwa kanjani lokho? Ngabe sengizisola kakhulu ngakho konke engangikwenzile phambi kukaNkulunkulu: UJobe wayencamela ukuzwa ubunzima futhi alahlekelwe yizinto azithandayo kodwa nokho akwazi ukwenelisa uNkulunkulu. Ngase ngikholwe eNkosini iminyaka eminingi impela, kodwa ngase ngilahlekelwe ukholo eNkosini. Ngakhononda eNkosini ngenkathi ngibhekene nokucwengwa, futhi yikuphi lapho ngangibonise khona uthando ngeNkosi na? Nginalokhu engqondweni, ngenza isinqumo ngedwa, ukuthi ngangingeke ngisakwazi ukufana nalokhu engangiyikho ngaphambili, ukuthi ngangizokweseka umyeni wami emsebenzini ayewenzela iNkosi, nokuthi kwakufanele ukuba ngibhekane nokuhlupheka okuthile.
Ngesikhathi ngicabanga ngale ndlela, ngokushesha ngazizwa ngingcono emphefumulweni. Ngezwa ukuthi la mazwi ayekhulunywe kahle kakhulu, futhi ayekwazi ukufinyelela esimweni sami sangempela. Ngabona ukuthi ayekwazi ukukhomba indlela yokwenza kimi futhi abangele ukuba ukholo namandla kuqubuke ngaphakathi kimi ngingazelele. Ngazicabangela ngathi: “Ubani owasho la mazwi? Kwenzeka kanjani ukuba ulwazi lwakhe luphakame kangaka? Sengifunde izincwadi ezithile ezilotshwe ngabantu abadume kakhulu abakholwayo, futhi nakuba lezo zincwadi zazilethe inzuzo kwabanye abantu, zazingabhalwanga ngendlela ecacile futhi ekhanyisela ngendlela yale ncwadi, noma enamaqiniso angaka. Ngempela, ubani owakhuluma la mazwi?” Yangidonsa le ncwadi ukuba ngiqhubeke ngiyifunde, futhi lapho ngiqhubeka ngifunda ngaya ngokuya ngizwa sengathi impela la mazwi ayekhulunywe kahle kakhulu. Umugqa ngamunye wawukhuluma nengaphakathi lenhliziyo yami. Kusukela kula mazwi ngaqonda ukuthi kungakhathaleki ukuthi ukuhlupheka komuntu kukhulu kangakanani, kumele alandele uNkulunkulu kuze kube sekugcineni. Lapho ebhekene nokuhlupheka, umuntu kufanele azithobe ngokuzinikela kuNkulunkulu. Uma umuntu eba buthakathaka lapho ebhekene nezilingo, kufanele abe nokholo, futhi ancike kuNkulunkulu ukuze ame aqine. Lapho ngiqhubeka ngifunda, ngazizwa ngikhanyiseleka ngokwengeziwe enhliziyweni yami futhi ngazithola ngokwengeziwe ngiba nendlela yokukwenza lokhu. Kwaba yilapho kanye lapho umyeni wami afika ekhaya, futhi ngambuza ngokushesha, “Uyithathephi le ncwadi?” Umyeni wami wamamatheka wathi, “Kukhona engiyiboleke kuyena, futhi kufanele ngimbuyisele yona maduzane.” Ngathi, “Nami ngifuna ukuyifunda le ncwadi.” Umyeni waphendula emamatheka, wathi, “Ngakho-ke thandaza! UNkulunkulu angenza kube njalo.”
Ngelinye ilanga, ngenkathi ngipheka, ngangilokhu ngilalela ngibuye ngingalaleli iculo elalidlalwa ngumyeni wami, “Ubani ongenalo uthando? Ubani ongalangazeleli ukubona uNkulunkulu? … UNkulunkulu wake wajabula futhi waba lusizi ngomuntu, namuhla uphinde wabuyisana nesintu, sekudlule izikhathi eziningi enomuntu. Ngemva kokuphuma eJudiya, abantu abatholanga ngisho nomkhondo Wakhe. Balangazelela ukuphinde bahlangane noNkulunkulu, abazi ukuthi namuhla sebephinde bahlangana Naye, babuyisana Naye. Kungahlala kanjani lokhu kungayivusi imicabango yayizolo? Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule namuhla, uSimoni iNdodana kaJona, ozalwa amaJuda, wabona uJesu uMsindisi, wadla etafuleni elilodwa Naye, futhi ngemva kokumlandela iminyaka eminingi wamthanda kakhulu: Wamthanda ngokusuka enhliziyweni yakhe, wayithanda kakhulu iNkosi uJesu. namuhla uphinde wabuyisana nesintu, sekudlule izikhathi eziningi enomuntu” (“Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Amazwi aleli culo avuselela imicabango yami futhi angivusela imizwa yokulangazelela ukubuya kweNkosi. Ngakhala njengalokhu ngangilalele, futhi ngazicabangela ngathi: “Selokhu ngaqala ukukholwa eNkosini, ngangicabanga ngeNkosi uJesu zonke izinsuku, futhi ngethemba ukuthi ingabuya masisha ukuze ngikwazi ukuyixoxela izindaba zezikhathi esezadlula. La mazwi ayeqinisile ngempela futhi enyakazisa umphefumulo, futhi nakakhulu ayekwazi ukuzwakalisa ukulangazelela kwabantu uNkulunkulu.” Ngabe sengiyeka lokho engangikwenza ngalalelisisa kahle, ngizwa elinye iculo elithi “Funa Kuphela Inhliziyo Ethanda Unkulunkulu” “Akukho lutho engilucela empilweni ngaphandle kokuthi imicabango yami ibonise uthando engithanda ngalo uNkulunkulu nezifiso zenhliziyo yami zamukelwe uNkulunkulu.” Ngacabanga ngathi, “Ubani owabhala leli culo? Kwenzeka kanjani ukuba isinqumo sakhe sibe sikhulu kangaka? Leli culo liyakhuthaza kakhulu kimina, futhi ingabe imsulwa kangakanani inhliziyo ethanda uNkulunkulu njengoba ikhuluma la mazwi, ‘Akukho lutho engilucela empilweni ngaphandle kokuthi imicabango yami ibonise uthando engithanda ngalo uNkulunkulu nezifiso zenhliziyo yami zamukelwe uNkulunkulu.’ Ngaphambili, lapho ngikholwa eNkosini, ngangingazi ngokuthanda iNkosi, futhi ngangifuna nje kuphela ukuthokozela umusa, ukuthula nentokozo evela eNkosini. Namuhla, leli culo lavula kakhulu indlela engangibuka ngayo umhlaba, futhi ngabona ukuthi abantu abakholwa kuNkulunkulu kufanele bamthande uNkulunkulu, futhi akufanele bazifunele lutho futhi yilolu hlobo lothando kuphela olungaba msulwa. Leli culo liculwa kahle kakhulu.” Ngabe senginquma ngokuyimfihlo enhliziyweni yami ukuthi nami ngiyafuna ukufuna le mpokophelo, nokuthi ngangizothanda iNkosi nomkungakhathaleki ukuthi ubani owayengayithandi.
Ngemva kokufunda amazwi ayekule ncwadi, kanye nokuzwa lawo maculo, ngabe sengenza njengokusho kwalawo mazwi. Lapho umyeni wami ephuma futhi uyosebenza futhi engenaso isikhathi sokusiza ngemisebenzi yasendlini, inhliziyo yami yayingakhathazeki njengoba yayenza ngaphambilini. Uma abafowethu nodadewethu benanoma yimaphi amaphutha abakushoyo, nami ngangikwazi ukubathethelela kuloko ababesuke bekushilo, ngoba ngangifuna ukwenza uNkulunkulu eneliseke. Ngangifuna kuphela ukufuna inhliziyo ethanda uNkulunkulu njengalokho iculo lalishilo.
Ngokuphazima kweso, isikhathi sokutshala amasimu sase sifikile. Ngokunye ukuhlwa, umyeni wami wayeqoqaqoqa wase ethi kimi, “Kusasa, ngizophuma ngiyosebenza ebandleni elikwenye indawo.” Ngathi ngokushesha, “Uzokwazi yini ukubuya emva kwezinsuku ezimbalwa?” Wathi, “Angazi. Ngizozama konke okusemandleni ami ukuba ngibuye ngokushesha, ukuze ungakhathazeki ngomsebenzi wasendlini.” Lapho ngizwa lokho ayekusho, ubuso bami bahwaqabala, futhi ngacabanga, “Uthi ngingakhathazeki ngakho, kodwa ngingahlala kanjani ngingakhathazeki? Uyahamba futhi awazi nokwazi ukuthi uzobuya nini, futhi amasimu akwamanye amakhaya asetshaliwe vele. Eyethu insimu ayikalinywa nokulinywa, futhi uma imbewu itshalwe emva kwesikhathi, ekwindla ngeke sibe nesivuno esihle. Uma leso sikhathi sesifika, siyokwenzenjani? Ukube nje umyeni wami uqala ngokuqeda ukuhlwanyela insimu yakhe bese ehamba-ke ayosiza abafowethu nodadewethu!” Kusihlwa ngalo lolo suku, ngalala embhedeni wami bungafiki ubuthongo ngigcwele ukuyaluza kwenhliziyo okukhulu: Ngesikhathi egcina ukuhamba umyeni wami wahamba isikhathi esingaphezu kwengxenye yenyanga ngaphambi kokuba abuye, kepha kwakungesona isikhathi sokusebenza epulazini. Manje, isikhathi esibucayi somsebenzi wasepulazini sase sifikile, futhi uma ehamba enye ingxenye yenyanga, ngiyokwenzenjani? Ngingahle nje ngimyale ukuba ahambe ayofuna lowo asizana naye emsebenzini ukuba enze lo msebenzi nje kwaphela. Kodwa ngaphinde ngacabanga ngakho: “Lokho ngeke kulunge, njengoba abafowethu nodadewethu belindele yena ukuba azobasiza. Uma engahambi, ngeke yini lokho kube yicala eNkosini?” Esimweni sokucwengwa, ngeza ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi ngathandaza: “Nkosi! Akukhona ukuthi angizimisele ukuba umyeni wami ahambe ayosiza abafowethu nodadewethu, ukuthi yisikhathi esifanele lapho umndeni wethu kufanele usebenze emasimini. Enhliziyweni yami, ngibhekene nokucwengwa okunzulu ngempela, futhi angazi ukuthi ngenzenjani. Nkosi! Ngicela usizo Lwakho, ukuba uvikele inhliziyo yami futhi ungangivumeli ukuba ngiphazanyiswe yilezi zinto.” Ngemva kokuthandaza, la mazwi angifikela ngokucace bha engqondweni yami: “Kungakhathalekile ukuthi isimo sakho sangempela siyini, kumele uqale ube nokuzimisela ukubekezelela ubunzima futhi ube nokholo lweqiniso, futhi kumele uzimisele ukudela inyama. Kufanele uzimisele ukubekezelela ubunzima nokulahlekelwa izinto ozithandayo ukuze ufeze intando kaNkulunkulu” (“Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Lawa mazwi masinyane ayibamba inhliziyo yami, futhi ayilethela ukukhanya okucacisayo: Kuyiqiniso lokho! Uma umuntu efuna ukwanelisa iNkosi, kumele anqume ukubekezela ubunzima futhi kufanele kunalokho abhekane nobunzima siqu sakhe futhi abe nokulahlekelwa kulokho akuthandayo ukuze anelise intando kaNkulunkulu! La mazwi anginika ukholo, futhi ngacabanga: Uma amasimu etshalwe emva kwesikhathi kancane, akusenani! Noma ngabe kungakanani esikuvunayo kusesandleni sikaNkulunkulu, futhi into ebaluleke kakhulu ngumyeni wami esebenzela iNkosi. Nginalokhu engqondweni, ngezwa ngilula futhi ngaba nokukhululeka enhliziyweni yami, futhi kwaba sengiyazumeka njalo. Ngakusasa ekuseni, ngathi kumyeni wami: “Khululeka uhambe uye emsebenzini weNkosi! Noma ngabe ubuya nini, akunandaba. Ngizothobela ilungiselelo likaNkulunkulu.” Lapho ngicabanga ngokuthi lokho engangikwenza kwakuyanelisa iNkosi, ngazizwa ngijabule futhi nginokuzinza enhliziyweni yami.
Umyeni wami wabuya emva kwezinsuku ezimbalwa, futhi ngathola ukuthi wayebonakala sengathi uguqukile waba omunye umuntu. Wangisiza ngemisebenzi yasendlini, wathi kimi: “Usebenza kanzima ngokwedlulele! Le minyaka embalwa edlule ibe nzima ngokwanele kuwe, wenza konke ngaphakathi nangaphandle kwendlu. Ngiyakwazi lokhu. Ngaphambilini, bengivame ukuhamba ngiyosebenza, ngingakusizi ukuhlanganyela nawe imithwalo yemisebenzi yasendlini. Esikhathini esizayo, ngizokwenza okuningi uma nginesikhathi.” Lapho ngizwa amazwi akhe, ngathinteka kakhulu ngoba umyeni wami wayengakaze akhulume ngale ndlela ngaphambili. Ngazicabangela ngathi: “Kusukela umyeni wami afunda leya ncwadi, kube khona uguquko olukhulu kuye. Akashumayeli nje kuphela ngokukhanya okukhulu, kepha isimo sakhe sengqondo ngami sihlukile kunakuqala. Ukufunda iBhayibheli kwakungazange kubangele izinguquko ezinjalo kuye esikhathini esidlule, kodwa emva kokufunda leya ncwadi wayeguquke kakhulu ngesikhathi esifushane. Kubonakala sengathi ngempela amazwi akuleya ncwadi anamandla okuguqula abantu!” Ngesikhathi esifanayo ngangizwa sengathi amazwi ale ncwadi ayebe nenzuzo enkulu nakimi. Ngemva kokuyifunda, nganginokholo namandla, futhi lapho ngenza ngokuvumelana namazwi ayo leya ncwadi, ukunganeliseki engangikuzwa ngomyeni wami kwashabalala. Ngemva kokuba umyeni wami efunde le ncwadi, isimo sakhe sengqondo ngami sashintsha, futhi waqonda ukuthi angikhathalele futhi anginakekele kanjani. Zonke lezi zinguquko zangenza ngacabanga nakakhulu ngamazwi aleya ncwadi ayenamandla ngempela futhi enegunya! Kodwa empeleni, ubani owayebhale amazwi ale ncwadi? Ngangingakaze ngiyithole impendulo yalokhu.
Ngolunye usuku, ngemva kwezinyanga ezimbili, umyeni wami wathi ufuna ukungithatha ukuba ngiye naye emhlanganweni. Nganginomuzwa wokuthi lo mbuthano wawuyoba into ekhethekile kakhulu, kungenjalo umyeni wami wayengeke angithathe ukuba ngiyolalela naye. Ngangigcwele ukulangazelela enhliziyweni yami, futhi ngijahile ukuphinde ngibone le ncwadi futhi. Ngakusasa, mina nomyeni wami, kanye nodadewethu ababili, sasihlezi ngenjabulo emotweni sisendleleni eya kudade othile. Kwakukhona abazalwane nodade abaningi ababeyingxenye yalo mbuthano, phakathi kwabo udade owayeseminyakeni engamashumi amathathu owayedidiyela iBhayibheli futhi ahlanganyele kithi ngamaqiniso amaningi ngomsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina. Ngesikhathi ngilalele lokho udade ayehlanganyela nathi ngakho, ngazizwa nginohlobo olukhethekile lokukhanya enhliziyweni yami, futhi ngaqonda kahle iziqephu eziningi zeBhayibheli namayelana nokubuya kukaNkulunkulu ebuyela ukwenza umsebenzi wokwahlulela engangingawuqondi ngaphambili. Ngacabanga ngathi, “Uhlanganyela kanjani ngalokhu kahle kangaka, futhi ulixoxa kanjani iBhayibheli ngokucace kangaka? Ukwazi kanjani ukuba nokuqonda okungaka?” Khona-ke, udade lo, ubuso bakhe bugcwele ukumamatheka, washo kakhulu wathi, “Ngizotshela abafowethu nodade ulwazi olumangalisayo noluzojabulisa izinhliziyo zabantu. INkosi uJesu ekade sifisa ukuba ibuye isibuyile isenyameni phakathi kwethu ukwenza umsebenzi Wayo omusha, ukuveza izwi nokuvula wonke amaqiniso nezimfihlakalo, ukubeka obala izigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu kanye nohlelo Lwakhe lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, kanjalo nokuba kukaNkulunkulu sesimweni somuntu nezimfihlakalo zeBhayibheli. Namuhla, okuqukethwe yilokho engihlanganyela ngakho konke kuvela emazwini avezwe nguNkulunkulu.” Mina nabafowethu nodadewethu ababehlezi sezwa le ndaba enhle, futhi ekugcineni saqonda ukuthi kungani udade wayeqonda okuningi kangaka. Kwavela ukuthi konke kwakutshelwe abantu ngephimbo leNkosi eyayibuyile. Manje nathi sezwa izwi leNkosi, futhi sonke sangana ngenjabulo, sakhala izinyembezi zenjabulo, futhi indawo yonke yaqala ukuvevezela ngomdlandla. Ngangijabule kakhulu kangangokuthi kwakuthi angigxume yinjabulo, futhi ngacabanga ngathi: Ngaso sonke lesi sikhathi bengifisa ukuthi iNkosi uJesu ibuye ngaphambili kwesikhathi esilindelwe. Manje iNkosi ibuyile ngempela! Ngesikhathi ngisaphila, ngiyakwazi ukwamukela ukubuya kweNkosi uJesu, futhi ngenxa yalokho ngibusisiwe ngempela!
Ngokushesha, lapho kufika isikhathi sokuba sihlakazeke, odade banikeza ngamunye wethu incwadi ethi Ukwahlulela Kuqala Endlini KaNkulunkulu. Ngibambelele encwadini yezwi likaNkulunkulu, ngacabanga ngokushesha ngaleya ncwadi yangaphambili. Kungenzeka yini ukuthi yiyo le ncwadi? Lapho ngifika emuva ekhaya, ngabuza umyeni wami ukuthi, “Incwadi engayibona ngaloluya suku—ingabe iyizwi likaNkulunkulu elifanayo naleli udade alikhulume namuhla?” Umyeni wami wamamatheka futhi wathi, “Kunjalo.” Ngaleso sikhathi, kwakusengathi ngangivuka ephusheni. Leli phimbo livela kuNkulunkulu ngempela, yiphimbo lokuba kweNkosi uJesu ebuyile sesimweni somuntu, futhi yiphimbo likaNkulunkulu! Akumangalisi ukuthi la mazwi akwazi ukungishukumisa kangaka, anginike ukholo namandla, aguqule isimo sami esikhohlakele, futhi angisuse ekuhluphekeni. Khona-ke, ngamgxeka umyeni wami, ngathi, “Uthole umsebenzi omusha kaNkulunkulu; kungani ungifihlele na?” Umyeni wami wathi, “Ngalesiya sikhathi ngangifuna ngempela ukukutshela, kodwa iningi labantu basemndenini wakini bangabashumayeli ebandleni, futhi ngangesaba ukuthi ungase ungakuqondi lapho ngikuchazela. Ngangesaba ukuthi izihlobo zakho zizothola ngakho, futhi uma sezifikile ukuzokuphazanyisa nokukuvimbela, ngeke nje lokhu kugcine ngokudala ukuba nilahlekelwe yithuba lenu lokwamukela insindiso, kodwa futhi kwakuzongenza umuntu omubi!” Ngzwa lokho umyeni wami ayekusho, ukungamqondi kahle umyeni wami kwaphela, futhi ngaba nokubonga okwengeziwe kuNkulunkulu ngokungisindisa. Nganquma ukuba ngiyifunde kahle le ncwadi.
Ngenxa yokufunda izwi likaNkulunkulu uSomandla, umoya wami owomile wathola ukondleka nokunakekeleka…. Ngangingakaze ngicabange ukuthi ngangingakwazi ukuzwa izwi leNkosi ebuyile ngezami izindlebe, ukuba ngiphakanyiselwe ebukhoneni bukaNkulunkulu, ukubhekana ubuso nobuso noNkulunkulu, futhi ngazizwa nginokubonga okukhulu kuNkulunkulu ngothando nensindiso Yakhe. Emva kwezinsuku ezingaphezu kweziyi-10, umyeni wami nami kanye nodade abasabalalisa izwi sahlangana, sathatha abafowethu nodade bebandla lethu ababenokholo lwangempela eNkosini ukuba siyohlangana noNkulunkulu uSomandla. Lonke udumo nenkazimulo makube kuNkulunkulu!
Okwedlule: Ngakwamukela Ukubuya KweNkosi
Okulandelayo: Itabernakele LikaNkulunkulu Likubantu
UTian Ying, eChina Ngangikade ngiyikholwa leBandla i-Three-Self eChina. Ngenkathi ngiqala ukuzibandakanya emibuthanweni, abefundisi...
USu Jie, eChina Ngelinye ilanga ngo-1999, emuva kokuphela komhlangano, umfundisi wathi kimina, “Su Jie, nansi incwadi yakho.” Ngithe nje...
UChuanyang, eMelika Ngo-2010, ubusika eMelika bangenza ngagodola kakhulu. Ngaphezu kokubanda okuhlabayo kudalwa inhlanganisela yomoya...